🥇 ▷ Sidoo kale HTC ma sameyn doontaa taleefanka gacanta casriga ah? Faa'iidooyinku ma hooseeyaan ✅
Suuqa loogu talagalay ciyaaraha casriga wuxuu soo jiitamayay bilihii la soo dhaafay, waxkastaba waxaa mahadleh dhamaan danaha shirkadaha waaweyn ee waaxda tikniyoolajiyada sida Xiaomi, Razer iyo Nubia. Sida laga soo xigtay wararkii ugu dambeeyay ee adduunka ka soo baxa ee warshadaha, HTC ayaa dhawaan ku biiri kara shirkadan, iyagoo soo bandhigaya qaabkooda ciyaaraha ee mobilada.
Calaamadaha ugu horreeya ee ku saabsan waxay ku yimaadaan afka Chen Baijun, madaxa HTC Taiwan, kaasoo shaaca ka qaaday in shirkaddiisu ay soo saari doonto moodallo kala duwan inta u dhaxaysa hadda iyo dhamaadka sanadka. Hada, macluumaadku wali waa yar yahay oo wuu kala go’ay, laakiin waxay umuuqataa in taleefanka casriga ee HTC laga samayn karo iyadoo lala kaashanayo Mayday.
AKHRISO: HTC waxay ku dhawaaqeysaa Baxniintii
Bilaha soo socda, shirkadda Taiwanese ayaa la hadli doonta soo saareyaasha ciyaarta mobilada waana ay diri doontaa horumarin ee badeecadan cusub, in kasta oo ay suurtagal tahay imaatinkiisa weli lama xaqiijin. Dabcan, iyada oo fiirogaar weyn la leh in suuqa uu bilaabay inuu ku kobcinayo aaladaha qaarkood, wax soo saar cusub oo ciyaaraha HTC ah ayaa laga yaabaa inaysan ahayn fikrad la yaab leh.
Via: GizchinaXigasho: Mydrivers